Arsene Wenger Oo Saadaaliyay Kooxda Ku Guulaysan Karta Horyaalka Premier League Xilli Ciyaareedkan. | Somalia News
- Advertisement - Magaalada Jowhar waxaa xalay looga dhawaaqay Xildhibaanada cusub ee kamid noqonaya Baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Hirshabelle, Xildhibaanadan ayaana soo dooran doona xubno diyaarsan oo loo farmuuqay. Xildhibaanada cusub ee kamid noqday Baarlamaanka labaad ee Hirshabelle ayaa u badan kuwa aan ku imaan rabitaan dadka ay matalaan, waxaana inta badan la sheegay in Xildhibaanadan uu soo diyaariyay taliyaha Hay’adda NISA Fahad Yaasiin. Sida aan wararka ku helnay liiska Xildhibaanada waxaa laga reebay xubno badan oo taageero ka heestay dadka leh kursiga gaar ahaan Odayaasha dhaqanka ee soo xulaya Baarlamaanka Hirshabelle. Xubnaha qaarkood laga reebay in ay kamid noqdaan Baarlamaanka labaad ee Hirshabelle ayaa la sheegay in loo beegsaday in ay taageerayaal uhaayeen Ra’isul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Kheyre oo hada ah musharaxa Wadna xanuunka ku riday Villa Soomaaliya. Dhalinyaro badan ayaa loo beegsaday kaliya in ay aragti ahaan taageersan yihiin Xasan Cali Kheyre , waxaana xubnaha la xulay ee kamid noqday Baarlamaanka Hirshabelle u badan yihiin taageerayaasha Villa Soomaaliya iyo dad u shaqeeya Fahad Yaasiin. Waxa ayna arintan layaab ku noqotay dhalinyarada la beegsaday iyo sidoo kale odayaashii soo xulayay Baarlamaanka labaad ee Hirshabelle kuwaa oo meel la iska dhigay liiska xubno ay gudbiyeen lana soo magacaabay kuwa kale aysan ogeyn. Baarlamaankii labaad ee Galmudug ayaa markii lasoo dhisyay dhalinyaro badan oo raadinayay Xildhibaanimo loo beegsaday in ay xubno ka yihiin kooxdii Damul Jadiid ama xilal kasoo qabteen kana soo shaqeeyeen dowladii Xasan Sheekh . Siyaasadan ay bilaabeen kooxda Nabad iyo Nolol ayaa laga cabsi qabaa in mustaqblka saameyn badan ku yeelato kooxdan marka talada lagala wareego loo beegsado sidii iyagu u beegsan jireen dadka siyaasad ahaan kasoo horjeeda. Xafiiska Shabakada Allbanaadir.comMuqdisho So[email protected] - Advertisement -
Arsene Wenger Oo Saadaaliyay Kooxda Ku Guulaysan Karta Horyaalka Premier League Xilli Ciyaareedkan.
Tababarihii hore ee kooxda Arsenal ee Arsene Wenger ayaa sheegay in ayna kooxda Arsenal lahayn diciifnimo cad.
Arsene Wenger ayaa sidoo kale kooxdiisii hore u saadaaliyay ku guulaysiga horyaalka premier League xilli ciyaareedkan.
Gunners ayaa sif iican ku bilaabatay horyaalka premier League xilli ciyaareedkan iyaga oo badiyay 3 ka mid ah 4-tii kulan ee ay ciyaareen prmeier League.
Arsenal ayaa sidoo kale Quarter Final-ka Caraboa cup-ka la ciyaari doonta kooxda Man City.
Gunners ayaana doonaysa in ay ku guulaysato koobab kadib markii ay horay kor ugu qaaday FA Cup-ka iyo Community Shield tan ilaa markii uu Mikel Arteta yimid.
Kadib markii ay heshiis cusub ka saxiixdeen Pierre Emerick-Aubameyang sidoo kale 45 milyan oo euro kula soo wareegeen Thomas Partey dad badan ayaa wax weyn ka filaya Arsenal.
Tababaraha Halyeeyga u ah kooxda ee Wenger oo 22 sano kula guulaystay 3 horyaal ayaa sheegay in ay kooxda Mikel Arteta ku guulaysan karaan horyaalka premier League xilli ciyaareedkan.
“Waxan u malaynayaa waxa ay leeyihiin ruux kooxeed oo fiican, waxana ay haystaan fursad ay si fiican ugu ciyaari karaan”ayuu Wenger yidhi.
“Waxa aan rumaysanahay in ay adagtahay in ay horumariyaan dhibicihii ay heleen xilli ciyaareedkii hore”.
“Laakiin waxa aan aaminsanahay in ay Arsenal ku guulaysan karto horyaalka premier League sababta oo ah ma lahan diciifnimo dhab ah”.
Previous articleDeg Deg: Siyaasiintii Ugu badnaa oo u midoobay MD Farmaajo & Kenya oo Sheegtay in Ciidamadeeda…
Next articleKabtankii hore Barcelona ee Carles Puyol oo si cad u sheegay kooxda uu jeclaa inuu u ciyaaro